Sigcinwe eluvalelweni isi thathu esishishina ngabantu ku Qobo-Qobo – Ntu News
Sigcinwe eluvalelweni isi thathu esishishina ngabantu ku Qobo-Qobo
June 22, 2021 June 22, 2021 Jaco Gangat-Duvenage	0 Comments	SAPS
Isicelo sebheyile sabarhanelwa abathathu sihlehliselwe umhla wokuqala kwinyanga yeKhala kulo umiyo yinkundla ka Mantyi yakuQobo-Qobo.
Esi sithathu oko siseluvalelweni lwamapolisa ususela ngomhla wamashumi ababini anesibhozo kwinyang ka Canzibe kulo unyaka malunga nezityholo zokushishina ngabantu kule dolophu yakuQobo-Qobo .
Amadoda amabini kwesi sithathu zinzalelwane zelizwe iBangladesh, kwaye kusolwa ukuba esi sibini besisabelana ngesondo nentwazana eneminyaka elishumi elinesithathu ngemvume abayifumana ku mama walentwazana.
Iingxelo zithi emva kokuba egqibile la madoda ngalentwazana ebeye ayinike imali, mali leyo le ntwazana ibiyinika umama wayo ukuze akwazi ukuthenga utywala.
Onike ubungqina phambi kwe nkundla ka Mantyi, yinkosikazi yomnye wabamangalelwa noyinzalelwane yalapha eMzantsi Afrika, ebonisa inkundla ukuba kutheni enqwenela ukuba abarhanelwa bayinikwe bheyile, ngelithi la madoda anamashishini aqhwalelayo ngenxa yokuhlala eluvalelweni. Ehambisa esithi phaya eluvalelweni abafumani kutya kusemgangathweni.
Esi sithathu siselugcinweni lwamapolisa kwiziko loluleko elizinze eQonce.
← BAY BUSINESSES SECURE OVER R8 MILLION IN LRED SUPPORT
Provinces at various stages of readiness for primary school learners return →